Fantaro i Bill Cook, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter an’ny @NativeLangsTech ho an’ny 4-10 Jolay · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Bill Cook, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter an'ny @NativeLangsTech ho an'ny 4-10 Jolay
Voadika ny 28 Aogositra 2019 14:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Esperanto , English
Sary natolotr'i Bill Cook.
Ny taona 2019, ho fandraisana anjara amin'ny fanentanana an-tambajotra sosialy mba hankalazana ny hamaroam-pitey ety anaty aterineto, hifandimby hitantana ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech ireo Amerindiana mpikatroka sy mpiaro ny teny sy ny tenin'ireo Firenena Voalohany tenin'ny Amerindiana sy Firenena Voalohany. Mikasika an'i Bill Book (@creeinstructor1) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity amin'ny maha-mpampiantrano azy ity lahatsoratrana fampahafantarana ity.
Rising Voices: Mba teneno aminay ny mombamomba anao.
(Miarahaba antsika rehetra eto amin'ny tontolon'ny aterineto, faly aho amin'ny fangatahana ahy mba hanampy sy hiresaka kely mikasika ny teniko: ny Rock Cree. Eny ary, andao hanomboka!)
Bill Cook nisithīkāson ikwa wapātakociwanohk, atihkosākahikanihk, kakanātahk ohci nītha ikwa niwīkin mīkwāc oskana-ka-āsastīki.
Bill Cook no anarako ary avy any Southend aho, Reindeer Lake SK, Kanadà ary monina ao Regina, SK ankehitriny. Mahay miteny tsy miambakavaka ny teny Rock Cree aho, izay fantatra kokoa amin'ny anarana hoe “tenim-paritra ‘th’ an'ny Woodland Cree.
Ananako ny Bakalorea amin'ny Fianarana ny teny Cree nomen'ny Onversite FN ary ankehitriny mamita ny diplaoma Masters amin'ny resaka Fanabeazana sy Fampianarana ao amin'ny Oniversiten'i Regina. Mifantoka amin'ny Fanomezana aina vao an'ireo Teny Teratany ny asako: Mampifandray ireo mpianatra ny fiteny Cree avy lavitra any amin'ireo Mpiteny Cree amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Teknolojian'ny Fifaneraserana An-dahatsary. Efa am-polotaona maro aho no nampianatra ny fiteny Cree ho an'ny ambaratonga rehetra, avy any amin'ny zazakely ka hatrany amin'ny olon-dehibe.
RV: Manao ahoana ny toeran'ny teninao ankehitriny ao amin'ny Aterineto sy ivelan'ny tambajotra?.
Mampianatra ny fiteny Cree an-tambajotra ho an'ny Oniversiten'ireo Firenena Voalohany ao Kanadà aho amin'izao fotoana izao, manaraka ny endrika “fihaonambe” (tapakandro). Hanao fampianarana Cree an-tambajotra ho an'ny Winnipeg Holistic Expressive Arts Therapy Institute ihany koa aho amin'ny fararano 2019. Efa nanome fampianarana fiteny Cree An-tambajotra tamin'ny alalan'ny media sosialy koa aho tany aloha tany. Manao lasy ho an'ny fiteny Cree, atrikasa toy ny mpampianatra ary asana feo lafika ho an'ny fandaharana nitondra ny anarana hoe Louis Says (Hoy Louis) tao amin'ny APTN. Mbola mampivoatra rakitra hafa aho amin'ny fotoanako manokana miaraka amin'ny fikasana hizara izany ao amin'ny tranonkalako rehefa vitako ilay izy. Mizara failo ara-peo amin'ny alalan'ny quizlet aho miaraka amin'ireo mpianatro amin'izao fotoana izao, fa maimaimpoana ho an'izay rehetra mila azy izy ireny. Indro ny tranonkalako: www.creeclass.com
RV: Lohahevitra inona no tianao hifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech?
Hizara ilay fiteny sy ny kolontsaina Rock Cree mandritra ny herinandro hitantanako ny @NativeLangsTech miaraka amina : lahatsary, feo, saripika, sary manadrohadro, hanihany, sy fitaovana hafa ilaina izay mety hanampy ireo mpianatra sy ireo mpiteny ny fiteny Cree.
Heveriko toy ny ‘owīcihowīw – mpanampin'ny fiteny Cree aho, tsy mahay ny zavatra rehetra mikasika ilay fiteny aho fa mianatra zava-baovao foana isanandro. Fa mizara ny zavatra haiko aho ary mamela ahy hanao izany ny teknolojia, satria natao hozaraina sy hampitaina ireo teny teratanintsika. Mampianatra an'i nitānis (zanako vavy) aho ankehitriny mba hiresaka amin'izany fiteny izany ary manao izany amin'ny fomba maro samihafa. Toa mandaitra aminy aloha hatreto ny fampifamadihana rafiteny izay hifindrako avy any amin'ny teny Anglisy mankany amin'ny teny Cree sy ny mifamadika amin'izany ary ho tohixsko ny hanao izany miaraka aminy. Manao lahatsary fohy iray maharitra iray minitra ihany koa izahay mba hampianarana ny fiteny Cree ka i nitānis no asongadina ho toy ny mpampianatra. Ny ho afaka hiasa miaraka amin'ireo olona izay miaraka miasa amin'ny Fanomezana aina vao ny Teny Teratany manerana ny firenena no fanantenako. Eo am-pitadiavana asa tontolonandro mikasika ny Fanomezana aina vao ny Teny Teratany ao, noho izany dia ho tsara be ny fahafahana miditra ao anatina tarika iray matanjaka/mafy orina izay tia ny fitahirizana ny fiteny terataniny mba hahafahanay mampita ny fiteny sy ny kolontsainay amin'ny taranaka manaraka.